Ikhaya eliphangaleleyo kufutshane neChicago, iyadi ebiyelweyo yezilwanyana zasekhaya
Ikhaya losapho olunye lwanamhlanje elinendawo engaphezulu kwe-2100 sqft ebandakanya amagumbi okulala ama-3, amagumbi okuhlambela ayi-2.5. Ifakwe kwindawo ezolileyo eneendawo zokupaka simahla, ikhaya lethu linokufikelela ngokulula koololiwe kunye noohola bendlela abakhulu. Siyihambo emfutshane ukusuka eDowntown Chicago, kwisikhululo seenqwelomoya saseMidway, iZiko leNgqungquthela laseTinley Park, iHollywood Casino Amphitheatre, iidyunivesithi, ivenkile & yokudlela. Yonwabela ikhitshi egcwele ngokupheleleyo, iwasha / isomisi, iWIFI, iTV ehlakaniphile kunye nedesika ebanzi. Yiza uphumle kwindawo yokuhlala epholileyo ngexesha lohambo lwakho oluya e-Illinois!
Relax kwi-1 kumagumbi ethu okulala ama-3 okanye uzibandakanye kwi-tub yethu enzulu yokufunxa. Kwigumbi lokuhlambela, sikubonelele ngeetawuli ezimfumamfuma, ishampu, iconditioner, ukuhlamba umzimba, kunye nesepha. Amagumbi ethu okulala abandakanya ibhedi enkulu e-1, ibhedi eyi-queen eyi-1, iibhedi ezingamawele ezi-2, kunye nesofa yokulala enye. Yonwabele indawo yokupaka yasimahla kwaye ufike naphi na ngokukhawuleza ngokutsiba kuloliwe okufutshane okanye uthathe uhambo olufutshane. Thina uhambo olufutshane ukusuka Downtown Chicago, Midway Airport, Tinley Park Convention Centre, Hollywood Casino Amphitheatre, Governors State University kunye Prairie State College. Sikwakude nemizuzu ukusuka kwiivenkile ezininzi zegrosari, ukuthenga, ukutya, kunye nokuzonwabisa.
Ikhaya lethu linekhitshi eligcwele ngokupheleleyo, iwasha / isomisi, kunye nemidlalo emininzi. Ebusuku, phumla kwigumbi lokuhlala njengoko ubukele umboniso bhanyabhanya kwi-smart TV yethu okanye usefu kwi-intanethi yethu enesantya esiphezulu. Njengoko uphuma usiya ngasemva kwendlu, fumana indawo ethe cwaka ye-oasis, eneendawo zokuhlala, kunye nendawo enengca eninzi ukuze uyonwabele.
Ukuba udinga nantoni na esingakhange siyicinge, nceda usazise kwaye singakwazi ukukubonelela ngayo!
• Iindwendwe zinokungena kwikhaya lonke ngaphandle kwegaraji (nceda upake kwindlela yokungena)
• Kukwakho negumbi lokungena endlwini eliza kutshixwa (akukho kungena kwiindwendwe)
• Kukho iikhamera zokhuseleko ngaphandle kwepropathi ukwenzela ukhuseleko lomntu wonke
• Akukho matheko okanye iindibano ezinkulu
• Ukuba uzisa izilwanyana zasekhaya, nceda ulumkele ukuba isango elibiyelweyo linendawo apho izilwanyana zasekhaya ezincinci zinokubaleka khona
4.98 ·Izimvo eziyi-40
Thatha zonke izinto zakho eziyimfuneko kubandakanya igrosari esuka eWalmart ekwi-1 yeemayile! Ukukhangela ezinye iinketho, kukwakho nezinye iivenkile ezi-4 zegrosari phakathi kweemayile ezi-5.
Ujonge ukonwabela i-pizza ye-Chicago deep dish! Eli khaya likwiikhilomitha nje ezi-2 ukusuka eGiordano's, indawo yokutyela yepizza esisiseko kubo bonke abantu baseChicago. Ukuba ukhetha enye inketho ungaya eLou Malnati's Pizzeria, kumgama oziikhilomitha ezi-5 kuphela.
Ulambele enye into? IPanera, iGadi yomNquma, iChipotle, abafana aba-5, iPotbelly, kunye nezinye iindawo zokutyela ezininzi zingaphantsi kweemayile ezi-3!
Kwakhona jonga iikhampasi zeRhuluneli yeSizwe ekufutshane kunye nePrairie State College.
Iindwendwe ziya kuba ne-24/7 yokufikelela ngokupheleleyo ekhaya ngexesha lonke lokuhlala. Khangela In kumfowunelwa - ngaphantsi kodwa wonwabile ukubonelela ubuso ngobuso ngetshekhi kwisicelo. Qhagamshelana nam nangaliphi na ixesha ngexesha lokuhlala kwakho, ngayo nayiphi na imibuzo okanye iinkxalabo. Ndifikeleleka ngokupheleleyo kwiindwendwe ukuba kuyimfuneko.
Iindwendwe ziya kuba ne-24/7 yokufikelela ngokupheleleyo ekhaya ngexesha lonke lokuhlala. Khangela In kumfowunelwa - ngaphantsi kodwa wonwabile ukubonelela ubuso ngobuso ngetshekhi…